Mukadzi arikumera HOHWA pakati pemakumbo after arara nemurume weJoni – Makuhwa.co.zw
Mukadzi arikumera HOHWA pakati pemakumbo after arara nemurume weJoni
Mukadzi arikumera HOHWA pakati pemakumbo after arara nemurume weJoni. Mukadzi wechidiki wemuHarare, uyo ari kupupura kuti anoita zvechipfambi, anoti ari kumera zvinhu – zvimwe zvacho zvinenge hohwa – kusikarudzi yake mushure mekunge ashinha pabonde nemumwe murume waasingazive“waakakecha”.
Nekuda kwekuomerwa kwaaita, musikana uyu haana kana kunyara kuratidza Kwayedza zvaita sikarudzi yake – achichema – iyo yatovharwa nezvinhu zviri kumera izvi
Tarisai Batoni (20) anofungidzira kuti akasiya aiswa mhiko nemurume waakadanana naye kamwe chete, izvo zvava kuita kuti amere zvinhu zvakafanana nehohwa nezvimwe zvinenge dzimba remhuka yakaita sembwa kusikarudzi yake.
Musikana uyu anoti anongoziva kuti murume “waakakecha” uyu chizvarwa chekuSouth Africa.
Murume uyu akangosiya audza mhandara iyi kuti amupfidzisa pazviito zvake zvekudanana nevarume vakawanda.
Tarisai, wepanhamba 4809 Glen Norah A, anoti dambudziko iri rakonzera kuti kusikarudzi yake zvose nekunzira yekuita nayo tsvina.
Nechikonzero chekuti dambudziko iri ramuremera, uye achirwadziwa, Tarisai anoti ari kutsvaga vangamubatsire – zvose kuchivanhu, kuchinamato kana kune vechirungu.
Sezvinonzi dambudziko rekumera zvinhu kusikarudzi iduku, Tarisai ane pamuviri paasingazive kuti ndepaani.
Akaudza Kwayedza, pasina kutsveterwa, kuti aiita zvechipfambi achitsvaga mari kuvarume vakasiyana mumabhawa emuHarare umo akazvosangana nedambudziko rava kumutambudza iri.
Anoti anongodutira doro chero mhando, kusanganisira kirango, brongo nekuputa mbanje.
Tarisai anoti dambudziko rake rakatanga apo akadanana nemumwe murume wekuSouth Africa, uyo akazomuchaira nhare achimuti pake painge papera zvichitevera kushinha pabonde kwavainge vaita vasina dziviriro.
“Ndakatanga zvechipfambi ndiine makore 15 ndichingotenderera muHarare nekune dzimwe nzvimbo ndichitsvaga mari kuvarume. Pamwe inyaya yekuti ndiri nherera, amai nababa vangu vakafa kare ndiri mudiki zvekuti handivazive,” akadaro Batoni achiyerera misodzi pamatama.
“Dambudziko rezvinhu zvandiri kumera zvakaita sehohwa kana maruva, zvinosanduka nguva nenguva. Dzimwe nguva zvinoita semiti iri kumera kana kuita setsoka dzembwa kana dzimwe mhuka dzakasiyana. Ndava kuvharika kumashure kwose zvekuti ndinotora nguva refu kuita tsvina ndichirwadziwa zvikuru. Ndinotosvika pakuchema.
“Weti chaiyo haibude, uye inondipisa zvakanyanya. Ndinobuda mvura inovava zvekare mbatya dzinonamira zvinoda kuti ndinge ndichigeza nguva nenguva.
“Ndibatsireiwo hama neshamwari! Zimbabwe yose ndiyamureiwo!”
Tarisai anoti ari kudemba zuva raakasangana nemurume aiti anobva kuSouth Africa uyu murimwe bhawa riri kuKuwadzana 2, muHarare.
Anoti akadanana nemurume uyu ndokuzoenda vose kune imwe lodge iri kuHighfield, uko vakanodanana kwehusiku hwose.
“Murume uyu ndakaonana naye mubhawa mugore ra2011 ndokubva tadanana tawirirana kuti aizondipa mari yangu, US$20. Ndakazoshamiswa apo akanditi zvechipfambi chandaiita zvainge zvapera, handaizofa ndakashinha nemurume zvakare.
Related Topics:Mukadzi arikumera HOHWA pakati pemakumbo after arara nemurume weJoni
Controversial Pastor Mboro introduces anointed underwear